သောသီခို: ဗမာ့တပ်မတော် အရှင်လတ်လတ်မီးရှိူ့ သတ်ပစ်ခဲ့သော ကရင်ငြိမ်းချမ်းရေးကောင်စီ တပ်သား ရုပ်အလောင်းများ
ဗမာ့တပ်မတော် အရှင်လတ်လတ်မီးရှိူ့ သတ်ပစ်ခဲ့သော ကရင်ငြိမ်းချမ်းရေးကောင်စီ တပ်သား ရုပ်အလောင်းများ
"ကရင်တွေအားလုံး အတူတူပဲ အကုန်ရှင်း(သတ်ပစ်)လိုက်"
(နောင်တွင် ထိုတပ်မှူး၏ အမည်ကို အတိအကျသိရရင် ပြန်ဖေါ်ပြပေးပါမည်)
ဓါတ်ပုံ ပေးပို့ လာသော သက်ဆိုင်သူတို့ အားအထူးကျေးဇူးတင်ပါသည်။
Posted by ဇင်ယော် at 11:07 PM
လူတွေ အသတ်ခံရပါတယ်ဆိုကာမှ ဓါတ်ပုံ ပြခန်းချည်းဘဲ မလုပ်နဲ့လေ။ အကျိုးအကြောင်း သတင်းနဲ့ သတင်းသုံးသပ်ချက် ရေးအုံးမှပေါ့။
သူတို့ကို အဲလို အကြံပေးတာ ကောင်းပါတယ်...
ဒါပေမဲ့ ငါ့အတွက်တွေ့ အဲဒီပုံနဲ့ပဲ လုံလောက်နေပြီးလေ... ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ ဒီအသတ်ခံရတဲ့ လူတွေ အကြောင်း တော်တော်လေး ထွက်ပေါ်နေတာပဲ.......... ရက်ရက်စက်စက် အသတ်ခံရတဲ့......သူတို့ပုံတွေကိုတော့ ခုပဲ မြင်ရတယ်..
December 11, 2010 at 1:50 AM
Can't the Karen soldiers do like the burman soldier did to our Karen people? All Burman people are the same.
မအေလိုးခွေးဗမာစစ်သားတွေ.. ကရင်တွေ မလုပ်သေးဘူး လုပ်ရင်သူများနဲ့ မတူဘူးသာမှတ်ပေတော့။ ဗိုလ်သက်နိုင်ကို အလကားပြန်လွတ်တဲ့ကရင်တွေ သေသေချာချာစဉ်းစား။ ထိုက်တန်တဲ့ ပေးဆပ်မှုအတွက် မင်းတို့ အသင့်ပြင်ထားကြ ခွေးမျိူးတွေ။
My Leader Karen National Union or KNLA.
The Karen Should change their mind about keeping friends with Burmese.
Lot of Burmese soldiers surrender but you don't kill them , Instead you find better way for them to go to third country through UNHCR.
What happen to our brothers Karen soldiers now.
There are some leader want to play politic with civilian blood.
Do you think if the Burmese soldiers surrender now will you find them way to go to third country again.
Enemies is Enemies they will never be friends.
What I want to say is ( Burmese is Karen Enemies).
Favor seeking leader will oppose it i know.
December 11, 2010 at 6:34 AM
Hay DKBA that become BGF,
and the rest of Peace council
Look, it is just the example for you.
your time will be worse than this.
December 11, 2010 at 6:36 AM
Dear, Brother,sister (all Karen People on the world)
The time is action ,Burmese is Our"s karen Enemies. we have fighting burmese for our"s karen people freedom,
we must change our mind keeping freinds with Burmese.
တကယ်တော့ ဒီလိုကျေကွဲစရာအဖြစ်အပျက်က အခုစစ်အစိုးရလက်ထက် ကမှဟုတ်ပါဘူး. ဟိုးအရင် တတိတယမြန်မာပြည်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ကုန်းဘောင်မင်း လက်ထက်ကတည်း ကရှိ နေခဲ့ပါတယ်. မြစ်ဝကျွန်းပေါ်မှာကရင် ဗမာအဓိကရန်းတုံးက ကရင်လူမျိုးတွေ ရက်ရက်စက်စက် အသတ်ခံခဲ့၇တဲ့ document မရှိလို့ ကရင်လူမျိူးတွေအကွဲကွဲ အပြားပြားဖြစ်နေခဲ့တာလား. အနီးစပ်ဆုံး စစ်အစိုးရလက်ထက်မှာ အလင်းပြန်ဝင်ခဲ့တဲ့ ကရင် တွေ ရဲ့ရှေ့ မှာဘဲဗိုလ်မောင်အေးက ကရင်အလံကိုတက်နင်းခဲ့တဲ့မြင်ကွင်းကိုရော ကရင်လူမျိုး တွေ မေ့သင့်သေးလား. အခုဒီအာဇာနည်ရဲဘော်တွေကအသက်ပေးပြီး မြန်မာစစ်အစိုးရရဲ့ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုကိုကမ္ဘာသိအောင်ပြနေပါပြီ..
ကျွုပ်တို့ ကရင် လူမျိုးတွေအမြင်မှန်ရဖို့လိုနေပါတယ်….
နွားအဖွဲ.ရဲ.ဒီလုပ်မျိုးက ကရင်မှရယ်မဟုတ်ဘူး ကျန်တဲ.တိုင်းရင်းသားများအပေါ်မှာရော နောက်ဆုံး လူမျိုးဘာသာမရွေး ဒီအတိုင်းဒီပုံစံဘဲ သူတို.စစ်သားတွေဘဲ လူလို.သတ်မှတ်ပြီးကျန်တာကို ဂရုမစိုက်အောင်လဲ စစခြင်းစစ်ခွေလုပ်ထဲက အဆင်.အတန်းအားလုံး ဦးနှောက်အဆေးခံလိုက်ရတာလဲပါမှာပေါ. မအေလိုးခွေးမျိုးတွေ အလှည်.တော.ရောက်လာအုံးမှာပါ ငါတို.မမှီရင်တောင် နောက်မျိုးဆက်တွေအများကြီးရှိနေသေးတယ် မပူနဲ.မင်းတို.အလှည်.ရောက်လာစေရမယ်
lun Gyune said...
တစ်ခုပဲပြောချင်တယ်ကွာ မြန်မာ စစ်တပ်မဟုတ်ပဲ ဗမာစစ်တပ် ဆိုပြီး
သူတို့ကိုသူတို့ ခံယူထားကြတော့ ကျန်တိုင်းရင်းသားတွေကို လုပ်ပြီပေါ့
ဗမာသွေး ဟာ စောက်ဆင့်မရှိတဲ့သွေးအမျိုးအစား ဆိုတာ သိသာလွန်းတယ်
ငါတို့ ကချင်တိုင်းရင်းသားတွေကိုလဲ သူတို့ တိုက်ခိုက်နေတယ် စောက်ဗမာတွေ
အကုန်သတ်ပစ်မယ် သူတို့နေပြည်တော်ကို ငါတို KIA တွေ တစ်နေ့ ရအောင်
သိမ်းပိုက်ပြမယ် စောက်ဗမာ မျိုးတွေ ခွေးမျိုးတွေ
ဒီကေဘီအေ က နအဖ ရဲဘော်တဦးကို ဖမ်းဆီးရမိခဲ့
နအဖ စစ်တပ်နှင့် BGF တပ်တို့ ၏ လူ့ အခွင့်အရေးချိူးေ...
မြန်မာနယ်စပ်သို့် တရုတ်တိုက်ခိုက်ရေးတပ်ဖွဲ့၏ စစ်စခ...
Address of KNU President Saw Tamlabaw on Karen New...
Open Letter to Sr. Gen. Than Shwe - Asia and Burm...
The Ideology of Development
၂၀၁၁ ဇန်န၀ါရီလ ၈ ရက်နေ့ တွင်ကျင်းပသော ကရင်နှစ်သစ်က...
ကရင်ငြိမ်းချမ်းရေးကောင်စီ ၁၁ဦး လာရောက်လက်နက်ချဟု ...
နေပြည်တော်အတွင်းရေး - ကျောက်စိမ်းနှင့် ရခိုင်ရှေးေ...
ဘက်မလိုက် ကြားနေမူဝါဒဖြင့် ၀ ပြည်ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်...
ဘုရင့်နောင်မင်း နှင့် အပြိုင်ကြဲမည့် နရဲ့ဆွမ်မင်း
တပ်မတော်အတွင်းရေး - ဝေါလေတိုက်ပွဲဆုံးရှုံးမှုများ ...
နေပြည်တော်အတွင်းရေး - ငွေကြေးကိစ္စ တပ်မတော်ဗိုလ်ချူ...
တပ်မတော်အတွင်းရေး - တပ်တွင်းရိက္ခာပြသနာ - 23 Dec 2010
ဗမာ ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်း
Merry Christmas and Happy New Year from front line...
ခရစ်စမတ် တေးလက်ဆောင် (၂) - တိတ်ဆိတ်ည-သန်းရှင်းည
ခရစ်စမတ် တေးလက်ဆောင် (၁)
တိုက်ပွဲနှင့် နအဖ စစ်တပ်၏ လူ့ အခွင့်အရေးချိူးဖေါက်...
တိုင်းပြည်ကို ကာကွယ်နေသော မြန်မာ့တပ်မတော် တဲ့လား
စစ်ရေး၊ နိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေးဆိုင်ရာ ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်...
ဖယ်ဒရယ်ပြည်တောင်စု တည်ဆောက်ရေးဟူသည် အစွဲများပပျောက...
တိုက်ပွဲ၊ နအဖနှင့် BGF တပ်တို့ ၏ လူအခွင့်အရေးချိူး...
(၁၄)ကြိမ်မြောက် ကေအဲန်ယူ-ကရင်အမျိူးသားအစည်းအရုံး က...
မြန်မာပြည် ဒီနှစ် ခရစ်စမတ်
နေပြည်တော်အတွင်းရေး - စစ်လက်နက်သယ်ဆောင်သည့်တရုတ်သေ...
နအဖက ၎င်းတို့ ရိက္ခာသယ်ယူ နေသည့် ကားလမ်းဟောင်းကို စတင်...
FTUB ဒုတိယအကြိမ် ဗဟိုကော်မတီအစည်းအဝေးသဘောထား ထုတ်ြ...
ကရင်ပြည်နယ်အတွင်း တိုက်ပွဲများ ဖြစ်ပွားဆဲ
အသွင်ပြောင်းရေး လက်မခံသော SSA တပ်စခန်းအား နအဖထပ်တိုက်
'Divided groups will fall to junta'
ဗမာ့တပ်မတော်အတွင်းရေး - ကချင်၊ ရှမ်း၊ ကရင် စစ်ဆင်...
တိုက်ခိုက်မှု အသစ်တွေကြောင့် မြန်မာဒုက္ခသည်တွေ ထိုင်...
ဗမာ့တပ်မတော်အတွင်းရေး - ကချင်၊ SSA ၊ KNLA စစ်ဆင်ရေ...
နေပြည်တော်အတွင်းရေး - အရာရှိ ၂၀ ဦးရုရှားသို့ ဒီရက...
နေပြည်တော်အတွင်းရေး - တရုတ်သင်္ဘောရောက်ရှိ - 17 Dec ...
ကရင်နယ်ခြားစောင့်တပ်ရင်းသုံးရင်းမှ အဖွဲ့ဝင် ၁၀ဦးေ...
မန်းရောဘတ် ဘဇန် မှ ဆရာတီးမသေ သို့
ခေတ်နဲ့အညီ ပြန်လည်ဆန်းသစ်လာတဲ့ ကချင်ရိုးရာရက်လုပ်ထည်
နအဖနှင့် BGF ပေါင်းပြီး ရွာသားတဦးကို သတ်ဖြတ်
နအဖစစ်တပ် နှင့် BGF တပ်များ လူ့ အခွင့်အရေးချိူးဖေါ...
ကျောက်ဖြူတွင် လူငယ် တစ်ဦးကို စစ်တပ်က ပစ်သတ်
အချိန်တန်ပြီ ဆုံးဖြတ်ပါ (အီးမေးပေးစာတစ်စောင်)
နယ်ခြားစောင့်တပ် ၁၀၂၂ တပ်ရင်းမှ ဗိုလ်ကြီး စောဒိုစု...
အလင်းဝင် သတင်း ဖော်ပြချက် ၀ါဒဖြန့်ခြင်းဖြစ်ဟု DKBA...
နေပြည်တော်အတွင်းရေး - လက်နက်ကုန်ကြမ်း/စစ်လက်နက်ပစ္စ...
ဒုတိယ ပင်လုံမှသည် အနာဂတ် ပြည်ထောင်စု ဆီသို့(၁-၂-၃)
ဒုတိယ ပင်လုံညီလာခံ သို့မဟုတ် အမျိုးသားပြန်လည် သင့်...
Rebels take on Myanmar government
စစ်တပ်က မီးရှို့မည်ဆို၍ ရွာခံများ တိမ်းရှောင်ရ
လက်နက်ကြီး ပစ်ခတ်မှုကြောင့် ကနဲလေးရွာသားတဦး ဒဏ်ရာရရှိ
နအဖပစ်ခတ်မှုကြောင့် BGF ၇ဦး ကျ၊ ၂ဦး ထိခိုက်
ဗမာ့တပ်မတော်အတွင်းရေး - အချင်းချင်းပစ်သတ် - 11 Dec...
နအဖနှင့် ဒီကေဘီအေကြား တိုက်ပွဲများ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေ
ဖာပွန်မြို့နယ်ရှိ ခရီးသည်တင်စက် လှေ ၉စီး နအဖ ဖမ်းဆ...
ကရင်ပြည်နယ်အတွင်း စစ်အစိုးရ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖော...
ဒီကေဘီအေ နှင့် နအဖ တိုက်ပွဲသတင်း
ဗမာ့တပ်မတော် အရှင်လတ်လတ်မီးရှိူ့ သတ်ပစ်ခဲ့သော ကရင်...
ချင်းအမျိုးသားအလံ CNF အဆိုပြု
ရွေးကောက်ပွဲလွန် အတွေးအခေါ် ရေးထိုးစစ် တခုလေလား
DAB တိုက်ပွဲသတင်းထုတ်ပြန်ချက် (၂/၂၀၁၀)
နအဖ စစ်အစိုးရ ပစ်သတ်လိုက်သော ငြိမ်းချမ်းရေးကောင်စီ...
နေ့ စဉ်သတင်း -9Dec 2010
ဒုတိယပင်လုံကိစ္စ သဘောကွဲလွဲမှု ရှိ
Daily News on 8 Dec 2010
ဗမာ့တပ်မတော်အတွင်းရေး - ကရင်ပြည်နယ်စစ်ဆင်ရေး - ဗု...
The Kachin’s last stand The Kachin’s last stand
နအဖ စစ်ခွေးတွေ ပေါ်တာဆွဲပြီ
မန်ယူကိုဝယ်ဖို့ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စဉ်းစားခဲ့သလား
“Do or Die,” Daw Aung San Suu Kyi - Policy paper o...
ဗမာ့တပ်မတော်အတွင်းရေး - ဝေါလေ အခြေအနေမကောင်း -6D...
နေပြည်တော်အတွင်းရေး - ဗိုလ်ချူပ်ရဲမြင့် ဗိုလ်ချူပ်...
ဗမာ့တပ်မတော်အတွင်းရေး - ကရင်ပြည်နယ်စစ်ဆင်ရေး - ဆေး...
BGF တပ်ဖွဲ့ဝင် ၁၇ဦး ကေအဲန်ယူထံ ထွက်ပြေးရောက်ရှိလာ
စစ်အစိုးရနှင့် DKBA တိုက်ပွဲ ဆက်ဖြစ်
မဲန်ဒဲလား ထောင်သက် ၂၇နှစ်ကျော်၊ လွတ်။ ကရင်ရဲဘော်ေ...
မြ၀တီအခြေစိုက် နယ်ခြားစောင့်တပ်သား ၁၇ ထွက်ပြေး
မြ၀တီမြို့ နယ် ကရင်စုရွာက အဓမ္မပြောင်းခိုင်းနေ
အရှင်ဖမ်းမိသွားတဲ့ ကရင်ငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့မှ ရဲဘော...
နေပြည်တော်အတွင်းရေး - နယ်စပ်ပိတ်ဆို့ မှုတပ်မိသားစု...
နေပြည်တော်အတွင်းရေး - ကရင်ပြည်နယ်စစ်ဆင်ရေး - ထိခို...
နေပြည်တော်အတွင်းရေး - တရုတ်နယ်စပ်ပိတ်ဆို့ ရေး - 30...
နေပြည်တော်အတွင်းရေး - စစ်ရေး - ကချင် - ကရင် ဒေသ - ...
ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း ခင်ညွန့်ရဲ့ ဗွီဒီယိုမှတ်တမ်း ...
ရိက္ခာသယ်ရန်နှင့် မြေမြုပ်မိုင်း ရှင်းရန် နအဖမှ ကား...
ဘုရားသုံးဆူ - ကြာအင်းဆိပ်ကြီး ရေလမ်းခရီး သွားလာခွင...